Tallaal horseeday kor u kaca xannuunka qalalka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Tallaal horseeday kor u kaca xannuunka qalalka
Da'da 40-jir laguma arag wax halis ah
La daabacay tisdag 26 mars 2013 kl 12.25
Cilmi-baaris ballaaran oo ey maanta soo ban-dhigtay wakaaladda dawooyinka ayaa lagu sheegay inuu tallaakii hargabka doofaarku kor u qaaday suurtagal ah inuu kor u kaco cudurka qalalka hurdada (Narkolepsi) ee dhallaankii qaatey tallaalka hargabka doofaar ee Pandemrix. Iyadoona ey saddex jeer kor u kacdey halista ah iney cudurkaa qaadaan dhallaankii tallaalka lagu mudey.
- Waxaa muuqatay in muddadii aan baarista ku jirney 126 ruux uu cudurku asiibay tallaaka dabadii. Halka kuwii aan la tallaalin uu ku dhacey 20 ruux. Waxaa laga hadleyaa tiro saddex-jibbaarantey ee la hubo, sida uu sheegay mar uu u warramayay hayadda wararka Iswiidhen ee TT caalinka Ingemar Person, ahna madaxa cilmi-baaristan.
Marka laga yimaado tirada saddex-jibbaarantey ayuu caalinka Ingemar Persson haddana difaacay tallaalkii guud ee bulshada laga simey.
- Kolkii lagu sugnaa heerkii waagaa, waxaa jirteay masuuliyad sidii bulshada loo dar-yeeli lahaa. Hase yeeshee ay dhibaatada la xiriirta cudurka qalalka hurddadu (narkolepsi) si lama filaan ah u dhacday. Halka dhanka kale uu cudurka narkolepsi-gu yahay mid aan sidaa caadi u ahayn, isla-markaana ey adkayd sidii horay loogu ogaan lahaa, sida uu sheegay.
Cilmi-baarista waxaa lagu ogaadey kor u kac ku dhacay halista cudurka ee da'da 21 illaa iyo 30 jir. Dhallin-yaradaasina oo ku sugneeyd halis laba-jibbaaran, marka loo barbar-dhigo kuwa kale.
Halista ahayd in tallaalka laga qaado cudurka Narkolepsi ayaa sii yaraanaysay kolka da'du sii korortaba, iyadoona aan wax khatar ah aan lagu arag dadyoowga da'doodu gaarsiisneyd 40-jir.
Cilmi-baaristan oo lagu sameeyey bulsho tiradoodu gaarsiisan tahay 3,3 malyuun oo is tallaaley iyo 2,5 malyuun oo aan is-tallaalin ayaa lagu sameeyey muddadii u dhexeeysey koowdii bishii oktoober 2009 nillaa iyo diseembar 2011.